Izikhala - i-Decoora | Hlobisa
Ekhaya kunokwehluka izikhala lapho sizosebenzisa khona isikhathi sethu esiningi. Kungakho kubalulekile ukuthi isikhala ngasinye sibe ne- umhlobiso efanelekayo ukusetshenziswa nokusetshenziswa ukuthi sizonikeza leso sikhala. Izikhala ziningi, kuqala ngefayela le- ikhishi futhi i igumbi lokudlela, ngokulandela i- izindlu zokulala, ngidlula amabheshu futhi kugcine ngezikhala zokudlula noma zokuhamba, njenge IHholo noma a umamukeli, ngaphandle kokukhohlwa izikhala ezingaphandle ezifana ne- izingadi noma ama-patio, noma amahhovisi, lapho sizophinde sichithe khona isikhathi esiningi.
Indlela yokuhlobisa amakhishi amade
Por UMaria Jose Roldan kwenza Izinsuku ze-6 .
Amakhishi amade ajwayelekile kakhulu ezindlini eziningi zaseSpain. Ekuqaleni kungaba nzima ngandlela thize ngaleso sikhathi...
Vuselela ikhaya lakho uwedwa nge-microcement elungele ukusetshenziswa
Por Hlobisa kwenza Isonto eli-1 .
Ukwenza izinguquko ekhaya kungenye yezenzo ezithakazelisa kakhulu ngokwekhwalithi ye…
7 izinhlobo flooring for ekhishini ekhaya
I-pavement inendima ebalulekile ekuhlobiseni kwendlu. Endabeni yekhishi, lungisa...
Indlela yokukhetha usinki ongcono kakhulu wekhishi lakho
Ngaphandle kokuba yinto ebalulekile emakhishini, bambalwa kakhulu abantu abakhokha usinki ukunaka okufanele…
Amaphutha angu-9 abantu abawenzayo lapho behlanza
Ayikho into ezuzisa umuntu njengokubona indlu ihlanzeke futhi icocekile, ngaphandle...
Izitayela zokuhlobisa zango-2022 zamagumbi okuhlala esimanje
Akungabazeki ukuthi igumbi lokuhlala lingelinye lamakamelo abaluleke kakhulu endlini, yingakho…
Ungashintsha kanjani amathayili wekhishi ngaphandle komsebenzi
Por UMaria vazquez kwenza Inyanga e-1 .
Ingabe ikhishi lakho lidala? Uyafuna ukuyenza ibe yesimanje kodwa imisebenzi iyakwethusa? Ukungena emsebenzini akudingi nje kuphela...
Yibuphi utshani bokwenziwa obulungele ithala noma ingadi yendlu yakho
Isimo sezulu esihle ekugcineni sesifikile futhi sekuyisikhathi sokujabulela ingadi noma ithala ekhaya...
Indlela yokwenza ikhishi elincane likhululekile
Akulula ukupheka ekhishini elinamamitha-skwele ambalwa. Umkhathi unga...
Indlela yokukhetha indwangu yetafula engcono kakhulu yegumbi lokuphumula
Indwangu yetafula ingenye yalezo zinsiza ezingasiza ukuvuselela umhlobiso wekamelo lokuphumula. Ngaphezu kwe…
Izibuko eziyindilinga njengomkhuba wokuhlobisa indlu yokugezela
Isibuko singenye yalezo zinsiza noma izesekeli ezingeke zishode emhlobiso wasekhaya. A...
I-bougainvillea kuvulandi yakho noma engadini
Amakhambi asekhaya okususa amabala we-lime kumatayela
Imibhede entantayo ekamelweni lokulala, kungenzeka?
Yiziphi izibani ongazisebenzisa ophahleni abaphansi bendlu
Amakhishi we-Aga namahhavini, ukunethezeka kokuvuna
Amashalofu noma imichilo yokugezela yakho
Izesekeli ezi-5 zokuhlobisa kuvulandi omncane
Kubalulekile egumbini lokuhlanza
Iziqhingi zaseRustic, zekhishi lokhuni
Iqeda izindonga zangasese
Amakhishi ayi-7 anesiqhingi esinendawo yokudlela afakiwe
Usimende opholishiwe ekhishini
Imibono yokuhlanganisa umshini wokuwasha endlini yokugezela
Isitayela seRustic siyazika endlini yangasese
Indawo yekhofi ekhishini
Unobhala wanamuhla wokuhlobisa indawo yakho yokusebenza
Amakhabethe ekhishi: izinhlobo, izinzuzo nezinkinga
Ukusetshenziswa kwe-citronella ekhaya
AmaPergolas engadi, izinhlobo nokuthi uzikhetha kanjani